SellerSmile: Maxay tahay sababta aad ugala wareegayso kooxdaada taageerada Ecommerce | Martech Zone
Markii masiibada dhacday ee tafaariiqleyaasha la xiray, ma aysan saameyn oo kaliya xarumaha tafaariiqda. Waxay saamaysay dhammaan silsiladda saadka ee quudin jirtay tafaariiqlayaashaas sidoo kale. My shirkad latalinta isbeddelka dhijitaalka ah waxa uu la shaqaynayaa soo saaraha hadda si uu uga caawiyo sidii ay u dhisi lahaayeen Ecommerce-kooda iyo xidhmooyinkooda Martech si ay u taageeraan a ganacsi toos ah oo macaamiisha ah. Waa mashruuc adag maadaama aan awoodnay inaan ka shaqeyno dhammaan dariiqa cilmi-baarista iyo abuurista sumadda, iyada oo loo marayo isdhexgalka saadka.
Summada cusub si ay u soo gasho warshadahan ma fududa. Waxaan kula talinay inay lahaadaan dhowr xeeladood oo heer sare ah:
Products - kani waa kala duwanaanshahooda tan iyo markii ay naqshadaynayeen oo soo saarayeen moodada tobaneeyo sano. Waxay hore u yaqaaneen waxa iibinaya iyo sidoo kale khadadka alaabta soo socda ee u baahan in la sii daayo.
Khibrada Isticmaalka - Waxaan ognahay in hirgelintooda ecommerce ay tahay inay noqoto tan ugu fiican, markaa waxaan geynay goobta Ka adeegso dukaameeyaha waxaana loo adeegsaday qalab si fiican loo taageeray iyo mawduuca Shopify ee la hagaajiyay in laga shaqeeyo.
Raridda iyo soo celinta - dhoofinta bilaashka ah waa wax weyn, laakiin haysashada boorso diyaarsan oo lagu soo celinayo shay u baahan soo celin waa muhiim.
Adeegga macaamiisha - Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, haysashada koox taageero si ay ula socdaan iimaylka, taleefanka, iyo warbaahinta bulshada si wax loogu saxo macaamilka waxay noqon doontaa mid muhiim ah.
Macmiilkani ma laha sumad dhisan, marka mid kasta oo ka mid ah xeeladahan waa in la bilaabo isku mar. Taasi aad bay ugu fududahay badeecadaha, waayo-aragnimada, iyo dhoofinta… laakiin sidee ayaad u bilaabi kartaa kooxda adeegga macaamiisha? Hagaag, waa inaad si daacad ah u soo saartaa.
Waa maxay sababta Taageerada dibadda looga soo diray?
Kooxaha taageerada dibadda laga keenay waxay leeyihiin khibrad cajiib ah oo wax ku kordhinaysa sumaddaada. Faa'iidooyinka soo saarista kooxdaada waxaa ka mid ah:
Iska yaree kharashyada shaqaaleysiinta shaqaalaha ama kooxda VAs. Qiime dabacsan oo caadadii ku habsatay. Waajib ma leh, ma jiraan kharashyo qarsoon.
Daboolista aan walwalka lahayn todobada maalmood todobaadkii. Helitaanka koox la miisaami karo oo khubarada adeegga macaamiisha ah adoon shaqaaleyn, tababarin oo maamulin.
Ku kori iibkaaga istaraatiijiyad khibradeed oo dhamaystiran oo macmiil ah oo lagu wargaliyay xogta jawaab celinta macaamiisha.
Macaamiishaadu waxay heli doonaan khibrada wax iibsiga onlaynka ah ee ugu fiican koox luuqado badan ku hadasha oo leh naxwe gaar ah iyo waqtiyo jawaab celin degdeg ah.
Iibiye dhoola cadeyn waa hormuudka warshadaha taageerada ecommerce ee dibadda laga keenay. Waxay taageeraan Shopify Partner waxayna sidoo kale taageeraan suuqyada suuqa oo ay ku jiraan Amazon, Overstock, Etsy, Ebay, Sears, Walmart, iyo Newegg. Taageerada aasaasiga ah waxaa ka mid ah:
Taageerada email - Haddii baahiyahaaga caymisku ay yihiin 7-maalmood asbuucii, maalmaha fasaxa ah ama fasaxyada, SellerSmile waxay siisaa macaamiishaada taageerada dhammaan suuqyada e-ganacsiga iyo dukaamada webka.
Maareeyaha Guud - Faallooyinka iyo faallooyinka dadweynaha ee xun ayaa ah qayb caadi ah oo ka mid ah ganacsiga internetka laakiin faallooyinka muhiimka ah ee aan la filayn ayaa si degdeg ah u faafi kara. Adeegyada maamulka sumcaddooda waxay xaqiijiyaan in jawaab celinta summadaada la maareeyay.
Taageerada Chat Live - Bixinta taageerada wada sheekaysiga tooska ah ee booqdayaashaada mareegaha waa faa'iido tartan oo muhiim ah oo soo koobaysa farqiga oo dhista kalsoonida adiga iyo dhagaystayaashaada iyada oo loo marayo caawimaad degdeg ah oo hufan oo ka timaada khubarada adeegga.
Intaa waxaa dheer, Uur-dhoola sidoo kale waxay bixin kartaa:
Warbixin iyo la tashi - Warbixinta bilaha ah ee la habeeyey iyo istaraatiijiyad xilliyeed la wacida maareeyaha akoonkaaga si ay dib ugu eegaan waxyaabaha muhiimka ah, qaadashada, iyo fikradaha la qaadi karo.
La-talinta Adeegga Macmiilka - Ma waxaad raadineysaa inaad hagaajiso kooxdaada taageerada? SellerSmile waxa ay iska kaashadaan in ay dib u eegis ku sameeyaan habayntaada, dukumentiyada iyo siyaasadahaada oo ay dejiyaan qorshaha guusha.
Taageerada Baraha Bulshada - Maamulka bulshada si ay u siiyaan dukaameystayaasha khibrad aan toos ahayn Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn iyo in ka badan.
Maareynta FAQ – U fududee sidii aad dhakhso ugu heli lahayd jawaabaha saxda ah ee Su'aalaha Inta badan la isweydiiyo. Saldhigyada aqoonta dadwaynaha ee iskaa u adeegta waa halka ay macaamiishu aadi doonaan marka hore si ay u helaan caawimada ay u baahan yihiin.
Warbixinta dib u eegista - SellerSmile wuxuu gacantiisa u kala saari karaa dib u eegista alaabtaada maalin kasta si uu u muujiyo fursadaha muhiimka ah ee ku celcelinta alaabta iyo aqoontooda wax lagu daro.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad bilowdo taageerada macmiilka si aad u wado khibrad macaamiil oo wanaagsan iyo iibsi badan:
Isku day SellerSmile bilaash 7 maalmood
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa isku xirkeena xiriirka Iibiye dhoola cadeyn ee maqaalkani.
Tags: Amazon taageerokhibrada macmiilkataageero macaamiishataageerada iimaylka ecommercetaageerada ecommercetaageero emailTaageerada EtsyTaageerada Neweggtaageero ecommerce ka baxsantaageero dibadda ahmaaraynta sumcadiibiyedukaankaShopify plus taageeroTaageerada ShopifyDuluc mawduucaganacsiga bulshadaadeegga macaamiisha warbaahinta bulshadaecommerce warbaahinta bulshadamaareynta warbaahinta bulshadamaaraynta sumcadda baraha bulshadakudoodTaageerada Walmartwokiee